Dagaalkii ugu cuslaa oo ka dhacay Shabeellaha Dhexe iyo khasaaro ka dhashay - Awdinle Online
Dagaalkii ugu cuslaa oo ka dhacay Shabeellaha Dhexe iyo khasaaro ka dhashay
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay in kabadan 15 qofna waxaa ka soo gaaray dhaawac dagaal qaraar oo maanta ka dhacay degaanka Warciise ee duleedka magaalada Jowhar, kaasoo u dhaxeeyay Milateriga Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-shabaab.
Dagaalka oo saacado badan qaatay ayaa dadka ku dhintay waxaa kamid ah Maxamed Cabdiwaaxid Faarah oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Gorgor ee xoogga dalka. Marxuumka ayaa ku dhintay furimaha dagaalka isaga iyo askar kale, halka warar goor hore oo maanta ah soo baxay ay sheegayeen in uu qarax ku dhintay.
Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga oo ku sugan Warciise ayaa ii sheegay in ay hayaan dagaalamayaal Al-shabaab ah oo dhaawac ah, gaadiid ay ka qabsadeen iyo qaar laga gubay, halka dhinaca dowladda dagaalka looga gubay gaari nuuca dagaalka ah.
Khasaaraha dagaalka ee ka badan 10-ka qof ayaa la sheegay in uu isugu jiro labada dhinac, iyadoo wararka qaar ay intaas ka badinayaan tirada dhimashada. Dagaalka maanta ka dhacay Sh. Dhexe ayaa ah kii ugu cuslaa ee muddooyinkaan ka dhaca Sh/ dhexe oo uu ka socdo howlgal Milateri oo ka dhan ah Al-shabaab.
Previous articleRa’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo kulamo ka bilaabay Jowhar
Next articleDowladda Soomaliya oo cambaareysay howlgallada Kenya ee dhanka Cirka ah